चितवनका मतदाता भन्छन् दुःख बुझ्नेलाई भोट – Saurahaonline.com
चितवनका मतदाता भन्छन् दुःख बुझ्नेलाई भोट
सौराहा अनलाइन | २०७४, २७ कार्तिक सोमबार
चितवन, २७ कात्तिक । । रत्ननगर नगरपालिका–७ मालपुरमा रहेको मुसहर बस्तीका अकल माझीलाई दुःख माथि दुःख थपिँदै छ । आर्थिक अभावका कारण घर बनाउन नसकेर वर्षौदेखि चार जनाको परिवार एउटै कोठामा बस्दै आएका छन् । ज्याला मजदुरी गरेर जीवन गुजारा गर्दै आएका माझीले मजदुरी गर्न नसके उनको चुलोमा आगो बल्दैन । काम गर्न नसके भोकै बस्नुपर्ने बाध्यता उनको छ । अकल माझीको जस्तै अवस्था सो मुसहर बस्तीमा बसोबास गर्ने १९ घरधुरीको अवस्था उस्तै छ । मुसहर समुदायको प्रमुख समस्या बास र गासको हो । उनीहरुसँग राम्रो ओत लाग्ने घर र बिहान बेलुका गर्जो टार्ने भरपर्दो माध्यम छैन । अहिले मुलुक निर्वाचनमय बनेको छ । मुसहरको समस्या उम्मेदवारहरुको चुवानी एजेण्डा बन्न सकेको छैन । मुसहर समुदायले भोट हालेर नेताहरुलाई नेतृत्व तहमा पु¥याए तर उनीहरुको दुःख अन्त्यको लागि नेताहरुले काम गरेनन् । हामीले भोट हालेर नेताहरुलाई जितायौं अकल माझीले भने तर हामीलाई दुःख पर्दा कसैले हेरेनन् । ‘१५ वर्षदेखि एउटै कोठामा बस्नु परेको छ’ उनले दुःखेसो पोख्दै भने, ‘कमसेकम ओत लाग्ने एउटा सानो घर बनाउने ऋण सहयोग दिन्छौं भनेर पनि कोही आएन ।’
स्थानीय तहको निर्वाचनमा भोट हालेर मुसहर समुदायले नेताहरुलाई विजय गराए । सो निर्वाचनमा उम्मेदवारहरुले बिजुलीको मिटर हाल्दिछौं भनेर बाचा गरे । तर, निर्वाचन जितिसकेपछि उनीहरुको समस्या सामधान गर्न न मेयर आए न वडा अध्यक्ष नै आएका छन् । कोठामा एउटा बिजुलीको मिटर हाल्ने काम गरेनन् अकल माझीले भने घर बनाइदेलान् भनेर त आशै छैन । लालपूर्जा नभएका कारण मुसहर समुदायले घरमा मिटर राख्न नसकेका हुन् । नेताहरुले सरकारी पहल गरेर प्राधिकरणबाट मिटर हाल्ने व्यवस्था गरिदिन्छकी भन्ने मुसहर समुदायको अपेक्षा रहेको छ । मंसिर २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनबारे उनीहरु खासै जानकार छैन । तर, निर्वाचन हुँदैछ भन्ने चाही थाहा रहेछ । मंसिरमा हुने निर्वाचन कस्तो निर्वाचन हो भनेर प्रश्न गर्दा अकलले भने सरकार बनाउने चुवाव हो भन्ने सुनेका छौं । निर्वाचनका बेला भोट माग्न मुसहर बस्ती पुग्ने नेताहरुले घर बनाइदिने, रोजगारी दिने, सिप सिकाइदिने, बस्ती व्यवस्थापन गर्ने आश्वासन दिने गरेको अकल माझीले बताए । ‘चुनाव जितिसकेपछि नेता फर्केर आउँदैनन्’ उनले भने, ‘अब हाम्रो समस्या नबुझ्नेलाई भोट दिँदैनौं । १५ वर्ष अघि एउटा विदेशी संस्थाले बनाइदिएको पाँच वटा भवनमा १० परिवार र भवनकै आडमा झुप्रो घर बनाएर अन्य ९ परिवार बस्दै आएको छ ।
बस्ती लथालिङ्ग अवस्थामा रहेको छ । खानेपानी र शौचालयको समस्या छ । आङमा लगाउने राम्रो कपडा र सुत्दा ओढ्ने न्यानो कपडा उनीहरुसँगै छैन । सबै परिवार मजदुरी गरेर धानिएको छ । भए खान्छन् नभए भोकै सुत्नुपर्ने उनीहरुको बाध्यता हो । बस्तीमा बालबालिका नाङ्गै यताउती गरिरहेका हुन्छन् । जाडो महिनामा न्यानो कपडा नभएर बालबालिका निमोनियाको शिकार हुने गरेका छन् । बस्तीमा गरिबीको तस्विर प्रष्ट झल्किन्छ । ‘भोट माग्न आउदा दुःख देखेर नेताहरुले गर्लान् जस्तो गर्छन्’ अकलले भने, ‘यहाँबाट गएपछि कहिल्यै फर्केर आउदैनन् ।’ मंसिरमा हुने निर्वाचनका लागि नेताहरु भोट माग्न सो बस्तीमा अझै पुगेका छैनन् । नेताहरु आउलान् र समस्याको पोको फुकाएर मन हलुका बनाउला भन्ने योजनामा मुसहर समुदाय रहेका छन् । अहिले सम्म नेताहरु आइसकेका छैनन् बस्तीकी धनकुमारी माझीले भनिन् आए भने धित मर्ने गरी भन्ने सोच छ । ‘अब आश्वासन दिने नेतालाई भोट दिदैनौं’ उनले भनिन्, ‘हाम्रो दुःख बुझ्नेलाई भोट दिने हो । २०७१ सालमा भएको दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन र स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेताहरुले मुसहर समुदायलाई घर बनाइदिने आश्वासन दिएर भोट मागे । तर, उनीहरुको घर सरकारले अहिलेसम्म बनाइदिएको छैन । घर बनाउन ऋण सहयोग मात्र दिए पनि एउटै कोठामा आठ जनाको परिवार बस्नुपर्ने बाध्यता टर्ने धनकुमारीले बताइन् ।
‘घर भए कमाएर खाने पाखुरा हामीसँग छ’, बस्तीका रमवा माझीले भने, ‘तर हाम्रो दुःख नेताले बुझेनन् ।’ सरकार बनाउने चुनाव भनेर बुझेका मुसहर समुदायले यस पटक आफ्नो दुःख बुझेर समस्याका समाधान गर्ने दलका उम्मेदवारहरुलाई भोट दिने योजना बनाएका छन् । दुःख नबुझ्ने नेतालाई बस्तीमा छिर्ने दिँदैनौं धनकुमारीले भनिन्, ‘जसले हाम्रो समस्या सामधान गर्ने भरपर्दो प्रतिबद्धता जनाउँछन् उसैलाई भोट दिन्छौं ।, आजको चितवनपोष्टमा खबर छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष विश्व पौडेलले लिए शपथ २०७८, १४ श्रावण बिहीबार
भुक्तानी नपाएपछि सर्लाहीका उखु किसान आन्दोलनको तयारीमा २०७८, १४ श्रावण बिहीबार
इजरायल प्यालेस्टाइनको द्वन्द्वको राजनीतिक समाधान खोज्नुपर्छ : संयुक्त राष्ट्रसंघ २०७८, १४ श्रावण बिहीबार
ब्राजिलमा कोभिडबाट हुने मृत्यु अझै घटेन, एक दिनमै १ हजार ३४४ को मृत्यु २०७८, १४ श्रावण बिहीबार
प्रधानमन्त्री देउवा र अध्यक्ष दाहालबीच मन्त्रिपरिषद् विस्तारबारे छलफल २०७८, १४ श्रावण बिहीबार
मन्त्रिपरिषद विस्तारबारे प्रचण्डले गरे माधव नेपाल र नारायणकाजी श्रेष्ठसँग परामर्श २०७८, १४ श्रावण बिहीबार
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष विश्व पौडेलले लिए शपथ
काठमाडौँ : राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्वनाथ पौडेलले पद तथा गोपनियताको शपथ लिएका छन् । पौडेललाई.....
इजरायल प्यालेस्टाइनको द्वन्द्वको राजनीतिक समाधान खोज्नुपर्छ : संयुक्त राष्ट्रसंघ
ब्राजिलमा कोभिडबाट हुने मृत्यु अझै घटेन, एक दिनमै १ हजार ३४४ को मृत्यु
प्रधानमन्त्री देउवा र अध्यक्ष दाहालबीच मन्त्रिपरिषद् विस्तारबारे छलफल
मन्त्रिपरिषद विस्तारबारे प्रचण्डले गरे माधव नेपाल र नारायणकाजी श्रेष्ठसँग परामर्श
बढ्यो सुनको मूल्य, प्रतितोला कति ?
जमुनाह नाकामा सुरक्षा सतर्कता